वीर अस्पतालमा ७६ जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित « Khabarhub
वीर अस्पतालमा ७६ जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित
कोरोना संक्रमण बढेसँगै स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण बढ्दो
काठमाडौँ– नेपालमा कोरोना संक्रमण दर बढेसँगै अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी पनि संक्रमित हुन थालेका छन् । केही दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका कोभिड अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुने संख्या बढ्दै गएको छ ।
कोभिड युनिफाइड अस्पताल वीर अस्पतालमा सोमबारसम्म ७६ जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएर होम आइसोलेशनमा बसेका छन् । अस्पताका उपनिर्देशक डाक्टर प्रज्वल श्रेष्ठका अनुसार स्वास्थ्यकर्मी आफै संक्रमित हुँदा पनि उपचारमा प्रभाव परेको छैन ।
उपचारमा कुनै कमी नहोस् भनेर स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समन्वयनमा करार अवधि तीन महिना थपिएको उनले खबरहबसँगको कुराकानीमा बताए । जसले गर्दा उपचारमा कमी नआउने उनको दाबी छ ।
यस्तै, वीर अस्पतालमा कोरोना संक्रमणको जानकारी दिनका लागि २४ घण्टा खुला रहने टोल फ्रि नम्बर पनि सुचारु गरिएको छ । पैसा नलाग्ने नम्बर ११३३ मा फोन गरेर सम्पूर्ण कोरोनाको उपचारको बारेमा जानकारी पाउँने उपनिर्देशक श्रेष्ठले बताए ।
‘यदि कोरोना संक्रमण भएर घरमा होम आइसोलेशन बस्ने ठाउँ छैन भने वीर अस्पतालमा आउँनुस हामी उपचार गछौं,’ उनले भने । पहिलो र दोस्रो लहरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै यो नम्बर चलाएको थियो ।
त्यस्तै, स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुने संख्या सबैभन्दा बढी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रहेको छ । अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा. निरज बमकाअनुसार अस्पतालमा विभिन्न वार्डमा कार्यरत सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन् । उनका अनुसार जनरल वार्डमा २६ जना, आईसीयू १०, एचडीयूमा १० जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएपछि अस्पतालले मेडिकल आईसीयू सेवा बन्द गरेको डा. बलमे जानकारी दिएका छन् ।
उता, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पनि ५ जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएको असपतालका सूचना अधिकृत डा. नवराज गौतमलले जानकारी दिए । त्यस्तै, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा ५ जना स्वास्थ्यकर्मीहरु संक्रमित भएको अस्पतालका फोकल पर्सन डा जितेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सरकारी तयारी के छ त यस्तो अवस्थामा ?
संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीहरुको होम आइसोलेशन र अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । प्रायः संक्रमितहरुलाई ज्वरो आउने, शरीर घाँटी दुख्ने, रुघाखोकि लगायतका लक्षणहरु देखिएको छ । यसरी स्वास्थ्यकर्मीहरु नै संक्रमित हुन थालेपछि अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभाव हुने देखिएको छ । अस्पतालमका स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभाव हुन नदिन सरकारले कदम चालिसकको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले जानकारी बताएका छन् ।
डा. अधिकारीका अनुसार सरकारले कोरोना संक्रमित बढेसँगै र अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीहरु संक्रमित हुन थालेपछि स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुन नदिन रिक्त जनशक्तिको व्यवस्थापन एवं करारमा भर्ना भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको म्याद थप भएको बताए ।
उनका अनुसार करारमा भर्ना भएका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको करार अवधि आवश्यकता अनुसार २०७८ माघ महिनादेखि बढीमा तीन महिनासम्म थप्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले आइतबारबाट कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका फन्टनलाइनरलाई बुस्टर डोज दिने निर्णय गरेको छ ।
आजदेखि ‘बुस्टर डोज’
फ्रन्टलाइनर र सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्नेलाई आइतबारदेखि ‘बुस्टर डोज’ खोप दिइएकोे छ । पूर्ण खोप लगाएको ६ महिना पुगेकालाई हाल सञ्चालनमा रहेका र थपिने नयाँ खोप केन्द्रबाटै ‘बुस्टर डोज’ दिइउको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार ९ लाख ४९ हजार ८ सय ८७ जनालाई बुस्टर डोज दिन लागिएको हो । स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी, सबै सुरक्षाकर्मी, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स तथा शववाहन चालक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खटिने कर्मचारीले समेत बुस्टर डोज पाउनेछन् ।
सरकारी कार्यालय, सामुदायिक सेवा प्रवाह गर्ने संघसंस्था, बैंकिङ सेवा, सञ्चारकर्मी, सार्वजनिक यातायातका चालक तथा सहचालकलगायतलाई पनि खोप दिइने डा. अधिकारीले बताए ।
प्रकाशित मिति : ३ माघ २०७८, सोमबार १२ : ५६ बजे
एक वर्षमै दुई अर्बभन्दा बढी डलर गुमाउनु नेपालजस्तो देशका लागि कठिन: गभर्नर
काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले एक वर्षमै दुई
काठमाडौँ महानगरपालिका–८ मा कांग्रेसको प्यानल विजयी
काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिका–८ मा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट आसामान सङ्गत प्यानलैसहित
नेपालमा भेटियो ‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’
काठमाडौँ– नेपालमा पहिलोपटक ‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’ रोग भेटिएको पुष्टि भएको
बाँसगढीको नगरप्रमुख र उपप्रमुखमा एमाले
बाँके– बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाको नगरप्रमुख र उपप्रमुखमा नेकपा (एमाले) विजयी
म्यान्चेस्टर सिटीलाई प्रिमियर लिगको उपाधि
काठमाडौं- म्यान्चेस्टर सिटीले यो सिजन इङ्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि जितेको